Maxay yihiin askarta ka tirsan AMISOM ee lagu xukumay dil toogasho? | Warbaahinta Ayaamaha
Maxay yihiin askarta ka tirsan AMISOM ee lagu xukumay dil toogasho?
AMISOM DIL TOOGASHO LAGU XUKUMAY
MUQDISHO-AYAAMAHA-Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 5-tii bishan ka bilaabatay Maxkamadda AMISOM ee Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Waxaa halkaas lagu dhageysanayay kiis dacwadeed loo haystay shan askeri oo AMISOM ka tirsan kuwaas oo lagu helay “in ay dad rayid ah ku dileen” deegaanka Golwayn ee Shabeellaha Hoose.
Dhacdada oo ahayd bishii August ee sannadkan, waxaa lagu dilay toddobo qof oo shacab ahaa, waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyay miino, ka dibna lagu qarxiyay.
Labo ka mid ah askartii la soo eedeeyay oo u dhashay Ugandha ayaa lagu xukumay dil, halka seddaxda kalena lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ah.
Afhayeenka Beeraleyda Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, wuxuu yiri: “Anaga aad iyo aad ayaan ugu faraxnay. Cuqdadii iyo cadaawaddii aan u qabnay Ugandha (meesha way ka baxday). Runtii waa farxad aan la koobi karin. Dadka waa la iska dili jiray lagamana hadli jirin. Waa taariikh ku cusub waddanka”.
Sidoo kale, madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, wuxuu dhacdadaas Golwayn ka dhahay in askartii dilkaasi geysatay la ciqaabayo isla markaana magdhow la siinayo qoysaskii dadkooga la laayay.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sheegay inaysan aqbali doonin, raallina aanay ka ahayn in shacabka Soomaaliyeed dhib loo gaysto.